त्यसैले म यो पेशमा लागे ! – Kantipur Np
त्यसैले म यो पेशमा लागे !
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत्र ०६, २०७७ समय: २१:१२:२८
प्रियंका आजकाल नाचनी रोटी (चामल र गहुँबाट बनाइएको) खाइरहेकी छन्। किनकि यो निकै स्वस्थवर्द्धक र रुचीकर पनि छ।यसका साथ उनी भिंडी, दाल, आलू गोभी लगायतका सब्जी खान्छिन्। खानाको साथ प्रियंका सधैं दही, सलाद र अचार नछुटाइ खान्छिन्। डिनरमा प्रियंका सुरुवातमा सधैं सुप पिउँछिन्
Last Updated on: March 19th, 2021 at 9:12 pm